'यो डुब्ने शहर' नयाँ गेमप्ले ट्रेलर ड्रप गर्दछ
घर हरर मनोरन्जन समाचार 'यो डुब्ने शहर' नयाँ गेमप्ले ट्रेलर ड्रप गर्दछ
हरर मनोरन्जन समाचारभिडियो खेल
by Waylon जोर्डन 23 सक्छ, 2019
द्वारा लिखित Waylon जोर्डन 23 सक्छ, 2019
Frogwares'अत्यधिक प्रत्याशित सिंक सिटी एक ब्राण्ड नयाँ गेमप्ले ट्रेलरको साथ यसको आगामी रिलीजको लागि तयार भईरहेको छ।
एचपी लभक्राफ्टको कामबाट प्रेरित सिंक सिटी निजी अन्वेषक चार्ल्स रीडको जुत्तामा खेलाडीहरू राख्छ। जब उनले ओसामन्ट, म्यासाचुसेट्स शहरको अन्वेषण गर्दै, बिस्तारै उसको दिमागमा लिएको पागलपनको लागि उपचार खोज्दै।
लभक्र्याफ्टियन प्रेमसँग परिचित व्यक्तिहरू लेखकको रचना र चरित्र र स्थानहरूबाट एल्डर भगवानहरूमा आफैले भेट्ने छन्।
चाल? तपाईको आफ्नै पागलपन र ओकमन्टको पूर्ण खोजी भइसक्नु अघि यसको उपचार पत्ता लगाउनुहोस्।
फ्रुगवेयरले सीधा क्वेस्टहरूको सेट संरचना र एक डरावनी खेलबिना पूर्ण रूपमा खुला संसारको आश्वासन दिन्छ जुन जम्प डराउनुको सट्टा तनाव र सस्पेंसमा निर्मित छ।
नयाँ ट्रेलरले विशेष रूपमा ओकमोन्टको भयावहता र पागलपनमा केन्द्रित छ आगामी रिलीजको पहिले कहिल्यै नदेखीएको फुटेजको साथ।
Frogwares टोली यस वर्षको EA3 मा PS27, XBox, र पीसी को लागि जून २,, २०१ 2019 मा ड्रप हुनुभन्दा अघि खेलको अन्तिम संस्करण देखा पर्नेछ।
तल त्यो नयाँ ट्रेलर जाँच गर्नुहोस् र प्रविष्टका लागि तयार हुनुहोस् सिंक सिटी!
Frogwaresएचपी लभक्राफ्टसिंक सिटीWaylon जोर्डन
ट्रेलर: नयाँ बदला बदला थ्रिलर 'द नाइटिंगेल' 'द बाबादुक' निर्देशकबाट
शूडर नविकरण 'जो बब ब्रिग्सको साथ अन्तिम ड्राइभ-इन सीजन २' को लागि